Munhu anoda zvinonetsa muhupenyu nekuti iwo anodikanwa kuti unakirwe nebudiriro. - APJ Abdul Kalam - Quotes Pedia
Isu, isu vanhu tine maitiro ekuti titakurwe mukufara. Kana mufaro ukagara kwenguva refu, isu tinofunga kuti ndiyo nzira yehupenyu. Zvatinotarisira zvinowedzera uye tinonzwa kuti ndiyo yakajairika. Isu tinotora zvinhu zvishoma uye hatizvikoshe zvakanyanya sezvataive nazvo pataive tisinazvo.
Asi isu hatifanire kushanda nenzira iyi. Tinofanira kuziva izvo zvatinazvo uye tigozvitenda nazvo. Chero chipi zvacho chatinacho chakawandisa, tinofanira kuchipa icho kune vamwe vanogona kuchida. Izvi zvichabatsira nharaunda kukura uye kubudirira pasina kugadzira rakakura kusiyana pakati pevaya vanofarira hupenyu hwakanaka nevaya vasina semukana.
Kana matambudziko akatibata, tinonzwa tichikanganiswa uye tobva taziva kukosha kwenguva dzakanaka dzataive nadzo. Hatife takaziva panouya njodzi. Saka, isu tinofanirwa kutenda nguva dzese dzakanaka dzatinadzo.
Patinosangana nematambudziko tinonzwisisa kukosha kwechokwadi kwezvese zvatingadai takarerutsa. Kana nguva dzakaoma dzikatanga uye tikazoona yakanaka nguva zvakare, ipapo tinonakidzwa nayo zvakanyanya. Imhaka yekuti tinoziva kuti takanga tazvikanganisa sei kana kuti tine rombo rakanaka sei kuti tinogona kuwana budiriro yatiri kuona nhasi.
Munguva dzakaoma, tinorasikirwa netariro asi kana tichibuda mairi, tinonzwisisa kukosha kweizvo zvatakave tichishuvira kwenguva yakareba zvakadaro, kunyange zvakatowanda. Nekudaro, zvese izvi zvakaoma, pamwe nenguva dzinofadza, batsira isu kuumbika mune vanhu vatinopedzisira tava.
Zvakaoma Muhupenyu Quotes Mifananidzo
Hupenyu Matambudziko Anotora mazwi
Positive Quotes Pamusoro Pezvezvinetso Zveupenyu
Quotes On Hupenyu Hwakasimba
Kana iwe uchida kupenya sezuva, tanga upise sezuva. - APJ Abdul Kalam
Kana iwe uchida kupenya sezuva, tanga upise sezuva. - APJ Abdul…
Shiri dzese dzinowana pekugara panguva yekunaya, asi gondo rinodzivirira mvura nekubhururuka pamusoro pemakore. Matambudziko akajairika, asi maitiro anoita mutsauko. - Dr. APJ Abdul Kalam
Shiri dzese dzinowana pekugara panguva yekunaya, asi gondo rinodzivirira mvura nekubhururuka pamusoro pemakore. Matambudziko…
Hatifanire kukanda mapfumo pasi uye hatifanire kutendera iro dambudziko kutikunda. - APJ Abdul Kalam
Kupa hausi hunhu hwepfungwa dzevanhu. Asizve, mamwe mamiriro ezvinhu anosvika patinonzwa sekupa ...